UMolefe uphonsela inselelo isinqumo sokuxoshwa kwa-Eskom | News24
Cape Town – Lowo obeyisikhulu esiphezulu kwa-Eskom uBrian Molefe, okudingeke ukuba ngoLwesihlanu kuhoxiswe ukubuyiselwa kwakhe kulesi sikhundla, uphonsela inselelo eNkantolo yezabaSebenzi isinqumo sebhodi lakwa-Eskom sokumxosha, wanikeza amaphepha abakwa-Eskom noNgqongqoshe wezamaBhizinisi oMbuso uLynne Brown.
Okhulumela uBrown uColin Cruywagen ukuqinisekisile ku-Fin24 ngeSonto ukuthi ihhovisi likaNgqongqoshe liwatholile amaphepha, futhi ithimba lakhe lisawafunda.
Ngesikhathi sokushicilela, uMolefe nabakwa-Eskom bebengakayihenduli imibuzo.
OLUNYE UDABA: UBlade Nzimande uthi uZuma nendodana yakhe badayisa ngezwe
NgoLwesihlanu, u-Eskom wamemezala ukuthi uMolefe akasesona isikhulu esiphezulu kwa-Eskom futhi ngeke esaba yingxenye yebhodi lakwa-Eskom.
UMolefe wavuma ukubuyela kwa-Eskom ngemuva kokuba uBrown ethole ukuthi unikezwe u-R30m ngokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi esifanele, nokuyinto aphikisana nayo.
Ukubuyela kwakhe kwa-Eskom kwagxekwa kakhulu amaqembu aphikisayo kanjalo neqembu elibusayo.